Akon’ny Tontolon’ny Bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2018 16:34 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Septambra 2005)
Manontany tena ny amin'ny antony tsy mahampy ny fampahalalàna sy vaovao momba ireo tanàna sy vohitra ankoatra ny renivohitr'i Tonizia i Zizou avy ao Djerba, milaza fa tsy ampy ny fandrakofan'ny media mahazatra ireo toerana ireo ary manantena izy fa hanohy ny asa ny bilaogy.
Miresaka momba ny FIFAK 2005, Fetibe Iraisam-pirenen'ny Horonantsary Tsy Matihanina hotanterahina ao Kelibia ny 27 Aogositra ka hatramin'ny 03 Septambra i Adib sy i MMM. Nanatrika azy io i Adib ary manome ny fahitany ilay fetibe sy ireo horonantsary tsara indrindra eto sy eto.
Hitsidika an'i Etazonia i Yamen anatinà drafitrasa manokana nokarakarain'ny Departemanam-Panjakana Amerikana sy ny Trano Fotsy, izay hatrehana sy hihaonan'ireo mpitarika, mpanao pôlitika, ary manampahaizana maneran-tany. Hisolo tena an'i Tonizia izy.
Manoratra (rohy maty) ny hatairany sy ireo olon-kafa nanatri-maso ny fakàna sary mitanjaka ambony tao aminà morontsiraka ho an'ny daholobe ao Gammarth i Karim.
Mitantara (pejy voafafa) ny fomba nanomezan'ny nenitoany boky fandrahoana sakafo Toniziana kosa The Brunette, satria hono heveriny fa efa lehibe ka tokony hanambady ity farany ary hila izany tsy ho ela. Tohizany amin'ny filazàna fa marobe ireo fomba fandrahoana sakafo hafahafa sy sarotra be tao anatiny.